Live CD / USB မှ Linux ကို boot လုပ်ရန် BIOS ဆက်တင်ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ Linux မှ
ဖြစ်ဖို့အကြီးအခြေလှမ်းတစ်ခု ကြားဖြတ် အဆိုပါအကြား အတွေ့အကြုံနည်းသောသုံးစွဲသူများ နှင့်အခြား operating system များအသုံးပြုခြင်းများသောအားဖြင့် BIOS settings ကိုဖြစ်ပါတယ်။ Paso ရိုးရှင်းပေမယ့် ဝေဖန် y လိုအပ်သော အတွက် ကြိုးစားကြည့်ပါeinstall မည်သည့်ဖြန့်ဖြူးမဆို Linux ကို.
2 BIOS Setup မျက်နှာပြင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
3 boot drive ကိုပြင်ဆင်ပါ
4 BIOS အဟောင်း
5 UEFI နှင့်လုံခြုံ Boot
သင်အကြိုက်ဆုံး distro ၏ live-cd သို့မဟုတ် live-usb ကိုဖန်တီးလိုက်သည်နှင့် BIOS ကိုသာပြုပြင်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ သို့မှသာစနစ်သည်သက်ဆိုင်ရာ drive မှ boot လုပ်မည်။
ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကွန်ပျူတာတစ်ခုကိုစတင်သောအခါ၊ BIOS (Basic Input / Output System) ကိုစတင်ရောင်းချသည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဟာ့ဒ်ဝဲ၏မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်နောက်ပိုင်းလည်ပတ်မှုကိုဖွင့်သည့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ စနစ်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော်၎င်းသည် operating system ကိုမစတင်ခင်သင်မြင်သောမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည် (၎င်းသည် ၀ င်းဒိုးလားသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာမဆို) ။
Linux ကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့် (သို့) တပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည့်အရာမှာ BIOS configuration မျက်နှာပြင်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီး hard disk တွင်ထည့်သွင်းထားသော operating system ကိုစတင်မည့်အစားကျွန်ုပ်တို့၏ live-cd သို့မဟုတ် live-usb ၌ရှိသောအရာကိုစတင်ရန်ဖြစ်သည်။ အမှုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်။
BIOS Setup မျက်နှာပြင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
Motherboard မော်ဒယ်တစ်ခုစီသည်တိကျသော BIOS ဖြင့်လာသည်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာမန်နေဂျာများအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုပင်ကိုယ်သိစိတ်ဖြင့်သယ်ဆောင်သွားလျှင်၊
ဤသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ပြီးပထမစာများပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် boot process ကိုရပ်တန့်ပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရာကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာကြည့်ရှုရန်« Pause »ခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်သည်။ ဖော်ပြထားသောစာများကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာမြင်နိုင်သောကြောင့်ယင်းကိုလျင်မြန်စွာပြုလုပ်ရမည်။
Startup လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်မရပ်နိုင်လျှင်ကန ဦး မျက်နှာပြင်ကိုသေချာစွာကြည့်ပါ။ ဤဖန်သားပြင်၏အောက်ခြေတွင်ဤကဲ့သို့သောမျဉ်းသည်များသောအားဖြင့် - « SETUP ထဲ ၀ င်ရန် F2 ကိုနှိပ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, သော့ကိုမဆိုအခြားဖြစ်နိုင်သည်။ အသုံးအများဆုံးမှာ - [DEL] or [Del], [Insert], [Esc], [F2], [F1], [F10] (သို့) တခြား function key များဖြစ်တယ်။
အချို့ BIOS အသစ်များက BIOS setup စာမျက်နှာကိုမသုံးပဲအခြားသော့ကို သုံး၍ boot စက်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အကြောင်းမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဤဆက်တင်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ပြောင်းလဲလေ့ရှိပြီး၎င်းသည်အသုံးပြုသူအားအမှားဖြင့်အခြားပြုပြင်မှုပြုလုပ်ရန်တားဆီးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ BIOS တွင်ဤ“ ဖြတ်လမ်း” ရှိပါကကီးဘုတ်မြှားကိုသာအသုံးပြုပြီးသက်ဆိုင်ရာ boot device ကိုသာရွေးချယ်ပါ။
ဒီ "ဖြတ်လမ်း", သို့သော်, 1 စတင်ရန်အလုပ်ဖြစ်တယ်; နောက်တစ်ခါ hard disk ၌ထည့်သွင်းထားသော operating system သည် boot တက်လိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်လျှင်ပြောင်းလဲခြင်းကို“ အမြဲတမ်း” ဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ် BIOS သည်အထက်ဖော်ပြပါ“ ဖြတ်လမ်း” မရှိပါကပြန်လည်ရယူခြင်း၊ သင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ရှိနိုင်သော BIOS configuration မျက်နှာပြင်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်သက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကိုနှိပ်ရမည်။ ဒီမှာပြသပေမယ့်အလားတူဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူ။
BIOS တည်ဆောက်ပုံမျက်နှာပြင်သည်ဘုတ်အဖွဲ့မှကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ဤနေရာသည်ယေဘုယျလမ်းညွှန်ချက်များကိုသာကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ သို့သော်ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ "Boot" နှင့် "Boot sequence" သို့မဟုတ် "Boot Priority" ဟုခေါ်သော "Tab Boot" နှင့်တူသော tab တစ်ခုကို "Advanced BIOS Features" စတိုင်၏ "ယေဘုယျ" tab တွင်တွေ့ရမည်။
ဒီနေရာမှာဒီနေရာကိုသတိရဖို့ကအရေးကြီးတယ် အစဉ်အတိုင်းလိုက်ခြင်း boot ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး စားပေးအစီအစဉ်များကိုထူထောင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ပထမ၊ ၎င်းသည် cd သို့မဟုတ် usb (ကျွန်ုပ်တို့၏ distro ကိုစမ်းသပ်လိုသည့်ပုံစံပေါ် မူတည်၍) မှ boot လုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ၎င်းသည်ပျက်ကွက်ပါက၎င်းသည် hard drive ပေါ်တွင်ထည့်သွင်းထားသောလည်ပတ်စနစ်မှစသည်။
Tabs များရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ် Setting များကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်အလွန်ကွဲပြားသည်။ တခါတရံ၎င်းသည်မြားကိုသာရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုခြင်းကိစ္စဖြစ်သည်။ အခြားအချိန်များတွင် PgUp နှင့် PgDn သော့များကိုသုံးရသည်။ သို့သော်ညာဘက်ရှိကော်လံတစ်ခုတွင်သင်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များကိုညွှန်ပြသည့်ရှင်းလင်းသောဇယားကွက်ကိုသင်အမြဲတွေ့လိမ့်မည်။ အောက်ခြေမှာ၊ အသုံးအများဆုံးအလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့နှိပ်ဖို့သော့တွေပေါ်လာတယ်။ အင်္ဂလိပ်၏အခြေခံအသိပညာသည်ဘာလုပ်ရမည်ကိုနားလည်ရန်လုံလောက်သည်။
သင်၏နောက်ဆုံးအပြောင်းအလဲများကိုသိမ်းပြီး setup program မှထွက်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည်သက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကိုနှိပ်ရမည် (ယခင်ဖန်သားပြင် F10 တွင်ကြည့်ပါ) ။
အချို့သောအဟောင်း BIOS များသည် USB drive မှ boot တက်ရန်အထောက်အပံ့မပါပါ။ ထိုကိစ္စတွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာများသောအားဖြင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော Linux distro ကိုစမ်းသပ်ရန် live-CD ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကို အသုံးပြု၍ (၎င်းအတွက် BIOS အထောက်အပံ့မရှိဘဲ) USB မှ boot ကိုအတင်းအကြပ်သုံးနိုင်သည် PLOP Boot Manager ကိုလုပ်ပါ.
အခြားအဟောင်းများကို BIOS များတွင် CD-ROM drive မှ booting အတွက်အထောက်အပံ့မပါပါ။ ထိုနည်းအားဖြင့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ boot floppies အနည်းငယ်ကိုသာအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည် Linux mini-distros ရရှိနိုင်ပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ အကယ်၍ စက်တွင်စီဒီဖတ်စက်ရှိလျှင်၊ BIOS က၎င်းကိုမသုံးနိုင်လျှင်ပင် live-cd မှ boot တက်နိုင်သည်။ စမတ် Boot ကိုမန်နေဂျာ o PLOP Boot Manager ကိုလုပ်ပါ.
UEFI နှင့်လုံခြုံ Boot
ယခုကဏ္sectionတွင် UEFI တပ်ဆင်ထားသည့်ကွန်ပျူတာအသစ်များသာပါ ၀ င်ပြီးယခု "ခေတ်နောက်ကျသွားပြီ" မဟုတ်ပါ။ ရည်ညွှန်းချက်အနေဖြင့် Windows 8 နှင့်အထက်ရှိသူများအားလုံး UEFI နှင့် Secure Boot ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ထားသည်။ တောင်းဆိုခဲ့သည် ဟာ့ဒ်ဝဲအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့အဘို့အမိုက်ကရိုဆော့ဖအားဖြင့်။
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) သည် BIOS interface အဟောင်းကိုအစားထိုးရန်ကြိုးပမ်းနေသည့် specification တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်များစွာသောသူများအတွက်အလွန်ရှစ်ဆယ်ရှိခဲ့ပြီး DOS အဟောင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်သောအပိုအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတွင် "secure boot" သို့မဟုတ် "secure boot" တို့ထင်ရှားသည်။
Secure Boot သည်ကွန်ပျူတာ၌ operating system ကိုစတင်ခြင်းမှတားမြစ်ထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မရှိပါကအန္တရာယ်ရှိသောကုဒ်များကိုမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းမှတားမြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်မည်သည့် bootkit အမျိုးအစားကိုမဆိုထိရောက်စွာလည်ပတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကထုတ်လုပ်သူများကို၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများကိုဤရွေးချယ်မှုဖြင့်ဖြန့်ဖြူးရန်ဖိအားပေးခဲ့သည်မှာ Windows 8 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရန်ဖြစ်သည် နှိုးဆော်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းအင်္ဂါရပ်သည်သုံးစွဲသူများအား ၀ င်းဒိုးအပြင်အခြားလည်ပတ်မှုစနစ်စတင်ခြင်းကိုတားဆီးရန်အတွက်သာရည်ရွယ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်မဟုတ်ဘဲအသုံးပြုသူများသည်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
မိုက်ခရိုဆော့၏အဆိုအရဤသို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းအာမခံချက်နှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ချက်တွင် UEFI (Legacy Boot ဟုလည်းခေါ်သည့် "BIOS လိုက်ဖက်တဲ့စနစ်" ကို သုံး၍ boot မှတဆင့်) နှင့် Secure Boot ကိုပိတ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Secure Boot သည်ဒီဂျစ်တယ်လက်မှတ်လိုအပ်သည်ကိုခွင့်ပြုချက်ကိုထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မဟုတ်သောသီးခြားလွတ်လပ်သောအာဏာပိုင်မှထုတ်ပေးသည်။
အမှန်တရားကတော့လက်ရှိ Linux ဖြန့်ချိမှုများသည်၎င်းတို့ကိုပေးနေခြင်းသာဖြစ်သည် ပထမအဆင့် UEFI နှင့် Secure Boot ကိုအသုံးပြုထားသောစက်များပေါ်တွင်လည်ပတ်နိုင်စေရန်။
လက်ရှိအခြေအနေ၌၊ Linux ကိုမထည့်သွင်းမီ Secure Boot ကိုပိတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ UEFI ကိုထောက်ပံ့မှုသည်အားနည်းချက်များရှိနေသော်လည်းပိုမိုဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သည်။ အမှားအယွင်းများရှိလျှင် Legacy Boot ကိုရွေးပြီး UEFI ကိုပိတ်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ။
UEFI နှင့် Secure Boot နှစ်ခုစလုံးကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် Windows 8 နှင့်အတူ Linux ကို dual-boot တပ်ဆင်ခြင်းကိုယခုအချိန်တွင်မထောက်ခံပါ။ လောလောဆယ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြန့်ချိမှုများ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို သုံး၍ Ubuntu 12.10, Fedora 18 စသည်ဖြင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းမခံရဘဲဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Live CD / USB မှ Linux ကို boot လုပ်ရန် BIOS settings ကိုမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း
အများကြီးသိသူတစ် ဦး အားအားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းရှိမရှိသိလို။ မှတ်သားရန်မှတ်စုတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်တို့ bios တွင်ရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည့်အသုံးအများဆုံးရွေးစရာများကိုသင်ခန်းစာယူပြီး၎င်းတို့တစ်ခုချင်းစီအတွက်မည်သည်တို့ဖြစ်သည်။
ငါမင်းနဲ့တော်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ ငါအမိန့် join !!!
အကယ်၍ ၎င်းသည် imac ဖြစ်ပါက cd မှစတင်ရန်ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြင်ဆင်မည်နည်း။
ကျွန်တော့် windows 8 pc ပေါ်မှာ Linux live cd boot မလုပ်ရဲတော့ဘူး
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိရင် ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ 🙁
မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များကိုဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသည်ကိုသတိပြုပါ။
BIOS ကို configure လုပ်ပြီးသည်နှင့် (ဆောင်းပါး၌ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း) linux distro ကို pendrive သို့ (unetbootin သို့မဟုတ်အလားတူ အသုံးပြု၍) ကူးယူပြီး pendrive နေရာတွင်စက်ကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။
အသုံးမ ၀ င်သော "ရှင်းလင်းချက်များ" များလွန်းသည် - သူသည်သူကိုယ်တိုင် "သူမည်မျှသိကြောင်း" ပြသရန်လိုသည်။ live cd ကိုစတင်ရန်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိပ်မများလွန်းသည်၊ သူကကတိပေးထားသည်နှင့်သူသည်သင်ယူရန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ သာမန်အသုံးပြုသူများအတွက်အနည်းငယ်ပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်သောဆိုဒ်များ ..
၎င်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့်သာ BIOS တစ်ခုစီကွဲပြားသောကြောင့်၎င်းသည်အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
Win နှင့် Canaima ကို install လုပ်ရန်အရေးတကြီးလိုအပ်မှသာလျှင် Canaima အတွက်ထွက်မလာသေးသော application များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်မှာ Win Win installer ဖြစ်သော Canaima ကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားစဉ်တွင်ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်စတင်သည်, ငါ bios အတွက် option တစ်ခုပြောင်းလဲပစ်ရန် SATA ထိန်းချုပ်မှု ... ဒါပေမယ့်ငါကပေါ်လာပါဘူးပြောတယ် ငါဘာလုပ်နိုင်လဲ ??
GNU / Linux ရှိ Live CD နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေခြင်း (အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောလူသစ်များအတွက်) သံသယများကိုရှင်းလင်းရန်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အောက်ပါ link မှာပါ။
ဟယ်လို! သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အရမ်းပြီးပြည့်စုံတယ်၊ နားလည်ရတယ်။ …။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ် Legacy Bios တွင်အလုပ်လုပ်ပြီး UEFI ကိုပိတ်ထားသည်။ CentOS7 နှင့်အတူတည်ငြိမ်မှု။
Bios A05 ကို အသုံးပြု၍ တစ်စုံတစ်ယောက်က Linux ကို dell inspiron တွင်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်
မေးခွန်းတစ်ခုမှာ Linux ပေါ်ရှိ disk သို့ install လုပ်ရန်၊ သင်သည် boot disk (အစား hard disk အစား usb) ကို bios မှပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင် UEFI မှကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအပြောင်းအလဲအားလုံးကိုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ Linuxux Safe UEFI မှပရိုဂရမ်ကိုစီစဉ်ထားသောကြောင့် boot disk သည် usb သို့မဟုတ် hard disk နှင့် boot လုပ်ရန်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်စက်ရုံမှ win 8 install လုပ်ထားသောကြောင့် windows များမှ UEFI ထဲ ၀ င ်၍ ပြုပြင်မှုများအားလုံးကိုလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ , ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် Linux iso (ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်တော့မည့် Ubuntu 16.4.1) သည် multi-starter နှင့်အတူလာလိမ့်မည်။ ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်ရမည်လားသို့မဟုတ် ubuntu ကိုရွေးချယ်မည်။
အင်နရစ် ရိုမီယို ဟုသူကပြောသည်
ကြည့်ရှုပါ။ ငါ UEFI နှင့်အတူလက်တော့ပ်ပေါ်တွင် usb မှ windows7ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ငါ UEFI Boot ကို Deactivate လုပ်ပြီး Legacy Boot ကို activate လုပ်ဖို့အပြင်ငါကထည့်ပြီး boot device ကို configure လုပ်တယ်။ ၎င်းသည် operating system ပါရှိသည့် USB မှတ်ဉာဏ်ကိုအပြည့်အဝအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၎င်းမှမဖွင့်ပါ။ boot option ၀ င်းဒိုးမှာမှတ်ဉာဏ်ကိုရွေးပြီး၎င်းသည်အမည်းရောင်မျက်နှာပြင်နဲ့အတူခဏနေပြီးလက်ပ်တော့ restart လုပ်ပြီး installation ပရိုဂရမ်ကိုမစတင်နိုင်တော့ပါ။ Linux ဖြန့်ချိမှုကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်အရင်ကအသုံးပြုခဲ့သည့် Debia နှင့် 4.1 ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုအခြားကွန်ပျူတာများတွင်ပြသနာမရှိဘဲရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အမှန်မှာ၊ ဤလက်ပ်တော့ပ်မော်ဒယ်လ်များတွင်ကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးသောအခြား operating system တစ်ခုတွင် operating system ကို install လုပ်ပြီး disk ကိုမူရင်းသို့လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော cd မှငါ့ကိုခွင့်မပြုပါ။ ဒီသေးငယ်တဲ့အဖြေကိုရှာနိုင်မလားသိလားငါမှာပြaနာတစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာသိပြီးကျွန်တော့်မှတ်ချက်ကိုဖတ်ပြဖို့အခက်အခဲရှိရင်၊
Bios ဆိုသည်မှာ Phoenix ၏လုံခြုံစိတ်ချရသောပစ္စည်းအပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည်
Enrique Romero အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည် windows 10 ပါသော toshiba satllite NB8t-AF ကို ၀ ယ်ခဲ့သည်။ အာမခံချက်ကုန်သွားပြီး ubuntu ကိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ မဖြစ်နိုင်ဘူး လုံခြုံစိတ်ချရသော boot အရာကိုကျွန်ုပ်ဖယ်ရှားလိုက်ပြီ။ ငါလိုချင်သောအခန်းကန့်များနှင့်ကလောင်မှ ubuntu ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ရလဒ်။ install လုပ်ပြီးသောအခါ reboot reboot လုပ်ပါက ubuntu အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်တော်ပိတ်ပါတယ် ငါမီးဖွင့်လိုက်တော့မသွားတော့ဘူး
(ထို့နောက်) reboot လုပ်ခြင်းနှင့်သင့်တော်သော boot device ကိုရွေးချယ်ခြင်း (သို့) boot media ကိုရွေးချယ်ထားသော boot device ထဲသို့ထည့်ပြီး key ကိုနှိပ်ပါ
အကယ်၍ ၎င်းသည်ဘောပင်ကိုအသိအမှတ်ပြုပါက၎င်းသည်ကလောင်မှလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် hard disk ပေါ်တွင်မမှတ်ထားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အကြံဥာဏ်တွေရှိလား။
တစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိုင်မလား။ ငါ linux canaima ကို win7နဲ့အတူကျွန်တော့် pc မှာ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ ပြီးတော့ canaima ကို install လုပ်တဲ့အခါမှာ start start canaima ပေါ်လာတယ်။ အဲ့ဒီမှာငါပေးပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ pc ပြန်လည်စတင်တာလား။ ကျေးဇူးပြုပြီးအဖြေအချို့။
"The GLMatrix" ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း